'५ नम्बर प्रदेश विभाजनको प्रस्ताव सबैभन्दा पहिले मैले नै राखेको हुँ': खुमबहादुर खड्का - Asian Samachar
‘५ नम्बर प्रदेश विभाजनको प्रस्ताव सबैभन्दा पहिले मैले नै राखेको हुँ’: खुमबहादुर खड्का
Asian Samachar बिहिबार, मंसिर २३, २०७३ (12 months ago) अन्तर्वार्ता
काठमाडौँ- सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा पारित नहुने भन्दै जतिसक्दो चाँडो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् ।
नेता खडकाले मुलुक हिन्दुराष्ट्र भएरै छाड्ने समेत उद्धघोष गरे । हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा आफू अन्तिम लडाई लड्ने तयारी रहेको समेत स्पष्ट पारे । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले खड्कासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
उसो भए ०७२ सालमा जारी भएको संविधान नेपालको संविधान हो कि होइृन ?
अब यो प्रस्ताव पारित हुँदैन । त्यसैले यो प्रस्ताव फिर्ता लिनु भन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन । आन्दोलनलाई चर्काउने काम गर्नुहुँदैन । सकेसम्म यसलाई भोलि नै नभए पनि पर्सि नै फिर्ता गर्नुपर्छ ।
तर राजसंस्था फर्काउनुपर्छ भनेर भन्ने त कोही पनि छैन नि नेपालमा ?
किन छैनन ? कमल थापाले छोड्दैमा हुँदैन ?
छैन । उहााले चाहनुभयो भने हुन्छ । मैले चाहेर हुने हो र ? मैले किन भेट्ने ?